🥇 ▷ Huawei Nova 5T, walaal cusub oo adeege ah oo walaalkiis ah Mudane 20 ✅
Huawei Nova 5T, walaal cusub oo adeege ah oo walaalkiis ah Mudane 20
Huawei wuxuu hadda daaha ka fayday qaab cusub, Huawei Nova 5T, kaas oo asal ahaan uu yahay walaalkiis inaadeerkiis Mudane 20 ah. Kala duwanaanshaha kaliya ee kala soocaya ayaa ah RAM badan, oo leh 8 GB halkii ay ahayd 6 GB, iyo sidoo kale qayb Rear leh a dhammayn kala duwan. Haddii kale, Nova 5T iyo Mudane 20 waa isku mid. Terminalkan cusub wuxuu sii iibin doonaa gudaha Malaysia laga bilaabo 5ta Sebtember Qiimaha sarrifka oo ah 330 Yuuro. Xilligan la joogo ma ogin in la iibin doono meel ka baxsan Aasiya.
Haddii aan isbarbar dhigno Sharafta 20 iyo Huawei Nova 5T waxaan arki doonaa in hore uu isku mid yahay. Labadu waxay la imaanayaan waji aan lahayn ku dhawaad ​​firaaqooyin leh dariiqyo ay ku qaabeeyaan qalabka sare iyo 6.26 ″ LCD panel leh 2,340 x 1,080 FHD + qaraar. Maxaa isbeddel ah ayaa ah gadaal, kaas oo kooxdan cusubi ay leedahay dhammayn kale oo dhammaystiran, oo ifaya, oo leh astaanta tooska ah ee geeska bidix hoose. Gudaha waxaa wali jira processor Kirin 980 ah, in kastoo ay weheliyaan 8 GB oo RAM ah. Kaydinta waxaan haysanaa 128 GB oo lagu fidiyo microSD.
Dhanka qaybta sawirka, Huawei Nova 5T waxaa ku jira kamarado gadaal ah oo afar-lens ah oo uu sameeyay 48-megapixel sensor weyn oo leh f / 1.8 aperture, oo ay weheliso xagal 16-megapixel ballaaran iyo f / 2.2 aperture, iyo sidoo kale saddexaad iyo dareeme afraad oo ah 2 megapixels. Waxaan u adeegsan karnaa 32 megapixel sensor hore oo leh f / 2.0 aperture ah. Inta soo hartay, Huawei Nova 5T, sida sharafta 20, Waxay bixisaa batari 3,750 mAh ah oo si dhaqso leh u saaran illaa 22.5W oo waxaa xukuma Android 9 Pie ka hooseeya EMUI 9.1.
Huawei Nova 5T ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Malaysia waxaana lagu taxay websaydhka Huawei ee ku yaal Singapore. Waayo hadda garan mayno haddii lagu iibinayo meel ka baxsan Aasiya, in kasta oo aannu si aad ah uga taxadiri doonno in aannu ogaanno haddii ay taasi tahay. Wadanka Malaysia waxaa lasii iibinayaa laga bilaabo bisha Sebtember 5keeda iyadoo lagu sarrifayo 330 euro. Waxaa loo heli karaa in lagu iibsado seddex midab: madow, guduud iyo buluug.
Warar kale oo ku saabsan… heer sare, Huawei